Направи си арка от цветя в градината | Art senses – идеи за дома и градината
ဥယျာဉ်တော်, ဥယျာဉ်တော်၌အလှဆင်, မူလစာမျက်နှာ, ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ, အပင်
Арка от цветя в градината може да си направи всеки, който има желание и вдъхновение за създаване на подобна неустоима красота. Различни видове арки са широко използвани през вековете в различни строителни конструкции и тяхната специфична форма, в зависимост от детайлите при изпълнението, се асоциира с класическа хармонична завършеност на монументални сгради – храмове, имения, дворци и палати. Използването на сводеста структура в градинските декорации е сравнително лесно за изпълнение, ефирно и същевременно стабилно. Независимо дали ще са два свързани помежду си свода или цял тунел, те дават благодатна почва за оформяне на изключително красиви куполи от цветя – своеобразен преход между два свята. Самите детайли при изпълнението могат да варират, както като използвани материали, така и със специфична форма и орнаментика. Полукръгли, островърхи, параболични, елиптични, с различни центрове и т.н. са част от характерните за различните региони и култури изпълнения.
လက်တွေ့ကျသောလက်ရာသည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အများဆုံးအသုံးပြုသောဥယျာဉ်ဒီဇိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောသစ်သားနှင့်သတ္တုများဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဝန်ပေါ် မူတည်၍ မြေပြင်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းကိုလည်းဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အပင်များနှင့်ပန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုအတွင်းပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါဥယျာဉ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသည်ထူးခြားလာသည်။ အကြောင်းမှာထိုကဲ့သို့သောကျက်သရေကိုဖန်တီးခြင်းသည်တိကျသောအသိပညာနှင့်စွမ်းရည်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥယျာဉ်တစ်ခုစီစဉ်ခြင်း, ဥယျာဉ်တော်၌မုတ်, ပန်းပွင့်များ၏မုတ်, အနုပညာအလှဆင်, ဥယျာဉ်, ပန်းပွင့်များ၏ဥယျာဉ်မုတ်, အဆင်အယင်တန်းဆာ, စိတ်ကူးများ, ဥယျာဉ်အတွက်စိတ်ကူးများ, ခြံများအတွက်စိတ်ကူးများ, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါဟုဆိုလျှင်၊, ရောင်စုံမုတ်, အရောင်များ, ပန်းပွင့်, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
သူတို့ကိုလူနေအိမ်နံရံလို့ခေါ်တယ်။ ထိုသူတို့ကတကယ်အသက်ရှင်! စဉ်ဆက်မပြတ် exoticism နှင့်လတ်ဆတ်မှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များ ...
နွေရာသီနီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများသည်အနားယူခြင်း၊ ပင်လယ်၊ ...